Dagaalyahanadda Al-shaabab oo Isaga Baxay Degmadda Balcad – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Kenya oo Sheegtay in uu Jiro Walwal La Xiriira Weerar Al-shabaab ay Fuliyaan
Dagaalyahanadda Al-shaabab oo Isaga Baxay Degmadda Balcad
Wararka ka imaanaya Degmadda Balcad ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ku waramaya in Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ay dib ula wareegeen Degmadda, kadib markii ay isaga baxeyn dagaalyahanadda Xarakadda Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa xalay degmadda ka weeraray Saddex jiho oo kala ah laba wado oo jaay ah kana timaada dhinaca degmada Afgooye iyo wada ka timaada dhinaca degmada Jowhar halkaas oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka degmada Balcad.
Ciidamadda Dowladda ee goobahaas ku sugnaa ayaa awoodi wayay in ay iska caabiyaan Shababakii weerarka soo qaaday,waxayna u baxeyn dhanka banaanka Degmadda.
Al-shabaab ayaa waxaa u suurta gashay in ay la wareegeen Xarunta Maamulka, Saldhiga Ciidamada, Xarunta Nabad Suggida iyo goobo kale.
Intii ay shabaab ku sugnaayeen gudaha Degmadda waxa ay Saldhiga Degmada Balcad ay ka sii daayeen dhamaan maxaabiistii ku xirnayd, sidoo kalena waxa ay gubeen gaari uu lahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle, gawaari ay lahaayeen mas’uuliyiin ka Tirsan Maamulka.
Al-shabaab ayaa xalay waqti dambe isaga baxay Degmadda balcad,waxaana saakay la wareegay Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya,waxaana degmadda ka socda howlgal.